စာသားအညွှန်း Ads Dethrones Google Adsense (ကျွန်ုပ်ဘလော့တွင်) | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 3, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
Google က Adsense ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကကြော်ငြာ ၀ င်ငွေ၏အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းရှိသည် ကော်မရှင်လမ်းဆုံ ကျွန်ုပ်၏ RSS feed ရှိကြော်ငြာများ၊ Kontera ငါ၏အပို့စ်များကိုအတွက် Contextual ကြော်ငြာနှင့် စာသားလင့်ခ်ကြော်ငြာများ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပါသည် ငါ့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ ထို့အပြင်ရံဖန်ရံခါရ Starbucks က PayPal မှတဆင့်လှူဒါန်းခြင်း။ ဝိုင်
ကောင်းသောလတွင်ငါ $ 300, ဝေးထံမှဆွဲချပေလိမ့်မည် ယောဟနျသ Chow $ 10k + ဆွဲချပေမယ့်ကျနော့်အမြင်နေဆဲလေးစားဖွယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာသည်ကြော်ငြာအားလုံး၏လုံးဝနီးပါးသန့်ရှင်းကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ငါကနေရာတိုင်းမှာကြော်ငြာတွေကိုတင်ထားနိုင်ပေမယ့်ငါ့ site ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြန်လာသော visitors ည့်သည်များအပေါ်ကြော်ငြာများကိုမတင်ချင်ပါဘူး။ ရှာဖွေရေးနှင့်ကိုးကားချက်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုသွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပျက်နေသောရှေးရှေးများအတွက်ကြော်ငြာကိုအသုံးပြုသည်။
ဂူဂဲလ် Adsense သည်ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံး ၀ င်ငွေရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ စာသားလင့်ခ်ကြော်ငြာများ ကျွန်ုပ်၏ Google Adsense ၀ င်ငွေကိုနောက်ကျသည်ဟုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ မေလမှာဒေါ်လာစုံတွဲတစ်တွဲကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဇွန်လမှာငါ Adsense ထောက်ပံ့တဲ့ခန့်မှန်းဝင်ငွေနဲ့ကိုက်ညီပေမဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိခဲ့ဘူး ဂူဂဲလ် Adsense ပိုကောင်းအောင်။ သို့သော်ဇူလိုင်လတွင်ကျွန်ုပ်သည် Text Link Adsense ထက်စာလျှင်နှစ်ဆလောက်များပြားလာသည်။ ဝိုး။
ရန် Key ကို စာသားလင့်ခ်ကြော်ငြာများ အောင်မြင်မှုဆိုတာက ၀ ဘ်ဆိုဒ်မဟုတ်ဘဲဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်ထားတာပါ။ သူတို့ကပိုမိုလွယ်ကူစေရန် WordPress အသုံးပြုသူများအတွက် plugin တစ်ခုပင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကြော်ငြာသူများသည်စကားလုံးများအစားစာမူများထက် 'ပို့စ်များ' ၀ ယ်ယူနိုင်သည် ၎င်းသည်ဘလော့ဂါနှင့်ကြော်ငြာရှင်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေပါသည်။ အကယ်လို့သင်ကပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တခုအပေါ်မှာတင်ရေးသားချက်တခုကိုရေးလိုက်ရင်၊ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့သင်သိတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုသင် ၀ ယ်နိုင်တာကအံ့သြစရာမကောင်းဘူးလား။ တော်တော်အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်း။
WordPress: ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီတွင် Dynamic Meta Description
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 47
ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်သည် ၃ လခန့်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း Google PageRank အပ်ဒိတ်များကြားတွင် ရှင်သန်နေပါသည်။ ထုတ်ဝေသူအကောင့်အတွက် လျှောက်ထားရန် ထိုက်တန်ပါသလား သို့မဟုတ် နောက်လာမည့် Google PageRank အပ်ဒိတ်အထိ စောင့်သင့်ပါသလား။
TLA သည် ကနဦးအတည်မပြုထားသော ဆိုက်များကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ကြောင်း ကြားသိရသော်လည်း ထိုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အချိန်ယူရနိုင်သည်ကိုလည်း ကြားသိခဲ့ရပါသည်။ အမှန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ။
7:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 23
ထုတ်ဝေသူအကောင့်အတွက် ရိုးရိုးသားသား ပေးချေမည်မဟုတ်ပါ၊ စောင့်ပါ။ ဒီကြားထဲမှာ သုံးလို့ရတယ်။Google Webmasters များ သင့်ဆိုဒ်သည် အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေကြောင်း သေချာစေရန်။ TLA က ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် timeline အကြောင်းတော့ မသိဘူး။ ဒီပို့စ်ကို ဘလော့ဂါက သူ့ဆိုက်ကို အတည်ပြုပေးလိုက်တော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာက၊ သူက တကယ်ကို စျေးကောင်းကောင်းရဖို့ လိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကို မရလိုက်ဘူး။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ပိုအာရုံစိုက်ပြီး မောင်းနှင်ချင်ပါတယ်။ မရောက်ဖူးသော အခြားဘလော့ဂ်များပေါ်တွင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို မှတ်ချက်ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ရခြင်းကို နှစ်သက်ပါသည်။ စကားဝိုင်းထဲ ထည့်လိုက်တယ်၊ 'ဟေး!' လို့ပဲ မပြောဘူး။ 🙂 ဘလော့ဂါအများစုက သူတို့ရဲ့ မှတ်ချက်ပေးသူတွေကို လာလည်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းကို မြှင့်တင်လိုက်ပြီး အရာအားလုံး လိုက်လာပါမည်။
12:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 43
ကျွန်ုပ်သည် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က TLA အတွက် လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း အတည်မပြုခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ဝဘ်ဆိုက်သည် လုံလောက်သော အသွားအလာ မထုတ်ပေးပါ သို့မဟုတ် Feedburner စာရင်းသွင်းသူများ လုံလောက်စွာ မရရှိဟု ထင်ပါတယ်။ အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့် စံနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 12:32 နာရီ
feedburner စာရင်းသွင်းသူများသည် စံသတ်မှတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဟု မထင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် စာရင်းသွင်းသူ6ဦးရှိပြီး ကျွန်ုပ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ :)
ကျွန်တော့် pagerank က4ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
သင် TLA နှင့် google adsense ကို အတူတကွသုံးနိုင်လျှင် အကြံဥာဏ်တစ်ခုရှိပါသလား။
13:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 05
မကြာသေးမီက ကြော်ငြာအတွက် အကြံဉာဏ်ကောင်းများ။ မတူညီတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်နှစ်ခုကို တင်ပြီး ကြော်ငြာတွေနဲ့ ရေကို စမ်းသပ်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။
14:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 39
သင်၏ အလွန်အသုံးဝင်သော အကြံဥာဏ်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တူညီသောဝဘ်ဆိုဒ်တွင် TLA နှင့် Adsense ကိုသုံးနိုင်သလား ပြောပြနိုင်မလား။ Google TOS ကို မဆန့်ကျင်ဘူးလား။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
14:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 34
အခြားကြော်ငြာရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုရန် Google TOS နှင့်မဆန့်ကျင်ပါ။ တကယ်တော့၊ ရင်းမြစ်များစွာနဲ့ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့ ဘလော့အများစုကို သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နိုဝင်ဘာလ 19 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 1:59 နာရီ
ကျွန်ုပ်သည် စာသားလင့်ခ်ကြော်ငြာများကို စတင်အသုံးပြုနေပြီ၊ မည်သို့သောအကြောင်းအရာများ ပျံ့နှံ့သွားသည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။